Maalinta: Sebtember 9, 2017
Khadka cusub ee Motas illaa gaadiidka magaalada
2017-2018 MOTAS, iyadoo la qaadayo taxaddarro la xiriira xilliga waxbarashada iyo tababarka, ayaa dib u habeyn ku sameysa isku-xirka duullimaadyada gobollada halkaas oo cufnaanta rakaabku ka dhacdo, waxayna u furaysaa khadad cusub oo waafaqsan shuruudaha. MOTAŞ waxay ku waddaa inta badan gaadiidka dadweynaha Malatya [More ...]
Editing Saacadaha Dhaqdhaqaaqa YHT
Iyada oo qayb ka ah shaqada socota ee Mashruuca Başkentray, dhismaha tareenada xawaaraha dheereeya leh ayaa la beddelay sababtuna waxay ahayd shaqada dhismaha ee Xinjiang Gar, iyo qaar ka mid ah istaagida 'YHT' ayaa laga saaray magaalada Xinjiang. Qaybta Xinjiang ee daraasadaha [More ...]
Magaalada Moscow, in kabadan hal jiil cusub oo taraam ayaa bilaabay inay shaqeeyaan. Kuxigeenka Duqa Magaalada Moscow Maksim Liskutov ayaa sheegay in in kabadan jiil cusub oo ka mid ah taraamyada Vityaz-M 80 ay bilaabeen inay ka shaqeeyaan wadooyinka gobolada waqooyi-bari iyo bariga Moscow. [More ...]
Xasillada geedka ee ku yaala Waqooyiga Weyn ayaa laga eegay meelahaas oo kale
Space Station Caalamiga ah (ISS), cir US Randy Bresnik Sii howlgalka, biqil photo ku marayay Istanbul in dhismaha ka socda Turkey ee warbaahinta bulshada paylaştı.istanbul 3. dhirta gobolka ee garoonka diyaaradaha ayaa soo jiidatay. [More ...]
Qorshaha wadada iyo wakhtiga safarka laba degmo oo ku yaalla Kocaeli
Qeybta Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Kocaeli, Degmooyinka Izmit iyo Basiskele oo ku yaal khadadka gaadiidka dadweynaha ee wadada iyo waqtiga qaban qaabada la sameeyay. Baaxadda qaban-qaabada la sameeyey, İzmit District 62 no. [More ...]
Selcuk IZBAN'a waa la furay
Raiisel wasaare Binali Yıldırım wuxuu Selçuk la yimid war wanaagsan. Khadka IZBAN Selcuk, gaar ahaan xafladda furitaanka iyo aasaaska Seljuk Binali Yildirim Seljuk wuxuu siiyay war muhiim ah Seljuk. Selcuk [More ...]
Deegaanka Denizli, tareenka rakaabka ayaa ku dhufta mashiinka dhismaha
Duulista Denizli Eskisehir ee Pamukkale Express Bozkurt ee degmada Denizli waxay la kulantay mashiin bilaash ah heerka isgoyska. Shilalka 17.30'da ayaa ka dhacay magaalada darajooyin Denizli Bozkurt. Pamukkale Express, oo Eskişehir ka dhigaysa safarka Denizli [More ...]
Ka danbeeya muuqaalka xiisadda munaasabadda IZBAN ee Selçuk
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Aziz Kocaoglu, ayaa u sheegay dhabarka dambe ee dhacdada dhacdada xaflada Seljuk İZBAN. Duqa Kocaoğlu wuxuu yiri in kasta oo xaqiiqda ah in 50 ay shuraako ku tahay İZBAN, ay saxaafadda ka barteen barnaamijka Selçuk waxayna yiraahdeen, “Barnaamijku maanta ayuu inoo sheegayaa, [More ...]
Maanta ee Taariikhda: 9 September 1861 Khadka Kaqsalka ee Bacda-Bannaanka ...